I-RED kunye ne-Sharp yokuqalisa i-TV ye-intshi ezingama-70 ngesisombululo se-8K | Iindaba zeGajethi
I-RED kunye ne-Sharp yokujoyina imikhosi yokwenza i-TV ye-8-intshi ye-70K
U-Eder Esteban | | Umfanekiso kunye nesandi, ZeThelevishini
Imakethi igcwele intsebenziswano engaqhelekanga, nangona namhlanje phantse akukho mntu wayelindele. Ukusukela iRED (uphawu lweekhamera ezibiza kakhulu) ujoyina imikhosi kunye ne-Sharp. Zombini ezi brand zisebenze kunye ukwenza umabonwakude. Nangona ayisiyiyo nayiphi na ithelevishini. Sijongene nemodeli kunye Isisombululo se-8K kunye ne-70-intshi.
Imodeli eyilelwe ukuhlangabezana neemfuno ezifunwayo zeengcali zaseHollywood. Ukusukela enkosi kwiRED, le modeli iyazifezekisa ezi mfuno. UPhil Holland, umbhali bhanyabhanya owaziwayo, ugunyazisiwe ukuba ayityhile le mveliso.
Sijongene nomabonwakude ngandlela thile inguquko evakalayo yazo zombini iimveliso. Ukusukela kunyaka ophelileyo iRED yasungula ikhamera ye8K kwintengiso. Nangona kunjalo, ijolise ngokucacileyo kwintengiso yobungcali, kuba ibiza malunga ne- $ 80.000. Ke le ntsebenziswano noSharp ibonakala njengenyathelo elisengqiqweni.
Kwakhona, Ubukhali yenye yeempawu ezimbalwa esele zivakalisile / zikhuphe isisombululo seTV ye-8K kwintengiso. Zonke ezinye iimveliso azinayo okwangoku imodeli enesisombululo okanye abacwangcisi ukuyisungula. Okwangoku kuphela I-Sony, iPanasonic kunye ne-LG bayasebenza kwesi sisombululo. Ke kukho icandelo lentengiso ebanzi kakhulu.
Enkosi kuPhil Holland sifunde ezinye iinkcukacha zeRED kunye ne-Sharp TV. Ifuna iintambo ezine ze-HDMI zesizukulwana esilandelayo kunye ne-8K yevidiyo evela kwikhamera yeRED Weapon 8K. Kwakhona kubonakala ngathi inyusa umgangatho wezinto ze-4K. U-Holland ngokwakhe uthelekise izinto ezirekhodwe kwi-4K kunye ne-8K ukubona umahluko kumgangatho phakathi kwezi zimbini.
Uye wabhala ividiyo ebonisa zonke izibonelelo zale RED kunye ne-Sharp TV. Njengoko sinokubona, yimodeli eyilelwe iingcali kwicandelo. Ke siyathandabuza ukuba iya kuba nesindululo esikhulu. Nangona kungekho has umhla wokukhutshwa okanye ixabiso lawo. Sinethemba lokwazi ulwazi oluthe kratya kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » ZeThelevishini » I-RED kunye ne-Sharp yokujoyina imikhosi yokwenza i-TV ye-8-intshi ye-70K
Iindaba kwi-HBO Spain kunye neMovistar + kaMatshi 2018